China Isicelo sentsimbi yokuthinta ukuvelisa kunye nefektri | UDaren
Intambo zentsimbi ezingenazingcingo (ukudibanisa) zinokusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle. Ngokwendawo yokusetyenziswa, inokubotshelelwa ngoku bhetyebhetye kwaye inokufakwa ngokulula ngesandla. Anti-ukwaluphala, anti-umhlwa, ray yelanga, ingxinano. Gcwalisa iinkcukacha.
Iimveliso zisetyenziswa kakhulu kunxibelelwano ngomnxeba, amandla ombane, ipetroleum, imichiza, iinqanawa zokuhambisa iinqanawa, iibhlorho, izitishi zamandla, izixhobo zamandla, izixhobo zoomatshini, izixhobo zamaphepha, ukhuselo lomlilo kunye nokunye ukubopha nokulungisa imibhobho, okanye ezinye iindawo ekufuneka zibotshiwe kwaye zilungisiwe.
Ukubopha intambo yentsimbi engenasici / intambo yentsimbi engenasiphelo / itayipi yentsimbi engenazingcingo yahlulwe yanzima kwaye imeko ithambile Ngokusisiseko uvelise uthotho lwama-201 kunye nama-304, athe aphumelela kwimigangatho ye-GBT.
1. Akulula ukurusa, amandla aqine phezulu, ukumelana nokuqina komhlwa;
2. Umbala ococekileyo, yenza iphakheji intle;
3. Anti-ukwaluphala, ukusetyenziswa ixesha elide;
4. Ingakwazi ukugcina ukusebenza kakuhle phantsi kweemeko ezinzima.
Ngokukodwa, ilungele ukupakishwa kobunjineli, iipali, ulwandle, izikhululo zamandla, ii-docks, iibhlorho, izixhobo, njl.
Ungayisebenzisa njani i-reel yensimbi engenasici:
1. Qhaqha isiphelo setheyiphu 2-3CM kufutshane nasezantsi kwebhakethi;
2. Dlulisa itape ejikeleze into ekufuneka ibotshiwe kwaye udlule kwi-buckle;
3.Gqithisela itheyiphu ngokuthe tye kumda wommese wokuqinisa umatshini kunye nenxalenye yokucinezela, kwaye uqinise umlomo webhanti ngaxeshanye;
4. Bamba i-buckle kwaye ujikeleze isiphatho ukuze uqinise amaqhina;
5. Emva kokuqinisa, gobisa itheyiphu kwaye umatshini wokuqinisa iteyiphu uye ngaphezulu kweedigri ezingama-90 ukunqanda i-tape bopha ekutsaleni umva.
Indlela yokugcina steel stainless:
1. Xa ugcina iteyiphu yentsimbi engenasici etshizwe ngeplastiki, umthuthi kufuneka anxibe iiglavu zobungcali ukuqinisekisa ukuba umphezulu ucocekile. Kwangelo xesha, ukuthintela ukukrwela komhlaba, kungcono ukusebenzisa intambo ekhethekileyo yentsimbi engenazingcingo ukukhusela izixhobo.
2. Xa ugcina, kuya kufuneka unike ingqalelo indalo esingqongileyo, njengokususa ukufuma, uthuli, ioyile, ioyile yokuthambisa kunye nezinye izinto kangangoko kunokwenzeka, kungenjalo iya kubangela umhlwa ngaphezulu, okanye ukunganyangeki komhlwa.
3. Xa kufakwe ubumanzi phakathi kwefilimu kunye neplastikhi efafazwe ngeplastikhi yentsimbi engenasici, inqanaba lomhlwa liya kukhawuleza kunokuba kungekho filimu. Gcina kwindawo ecocekileyo, eyomileyo nenomoya. Gcina imeko yokupakisha yasekuqaleni. Gwema ukukhanya ngokuthe ngqo kwiteyiphu yentsimbi engenazingcingo. Ifilimu kufuneka ihlolwe rhoqo. Ukuba ifilimu iyawohloka (ubomi befilimu: iinyanga ezi-6), kufanele ukuba ibekwe endaweni yoko nangoko, ukuba into epakisha ifakiwe xa ufaka iphedi, iphedi kufuneka isuswe kwangoko ukuthintela ukubola komhlaba.